Iimaski zokulahleka kunye neenwele. Ukupheka kweemaski ezisemgangathweni ngokuchasene nokuhlaselwa ekhaya.
Ubuhle bomfazi Ukunyuka Kwezinwele
Amasikhaya asekhaya asebenzayo ngokuchasene ne-dandruff
Phantse rhoqo ngexesha elilodwa ebomini, kodwa sijamelene ne-dandruff - enye yezifo zesikhumba ezingamnandi. Ukongezelela kwintlungu engathandekiyo ye-esesthetic, i-dandruff ingabangela ukuba kubekho iingxaki ezinzulu, ngokomzekelo, kubangela ukulahleka kweenwele. Ngokuphathelele indlela yokujongana neentambo kunye nemiphumo emibi ngokuncedisa izilwanyana zabantu kwaye kuya kuxutyushwa kwinqaku lethu.
Izizathu eziqhelekileyo ze-seborrhea
I-Dandruff yintsholongwane ekhu- lu efile ehlanganisene kunye, ijika ibe yinto encinci. Ngomntu onempilo, inkqubo yokufa kweeseli ihamba ngokukhawuleza, kwaye iiseli ngokwabo ziba ngothuli kwaye zisuswe ngokuhlamba okuqhelekileyo kwentloko. Kodwa kumntu obhekene ne-seborrheic dermatitis, loo maqabunga ahlambulukanga, kodwa ahlale ekhumbeni aze agqume ama-pores, aphazamise utshintsho lwe-oxygen. Ngenxa yoko, iinwele ziba buthathaka, zibuthathaka, zihlutha, zenzeke ekulahlekelweni.
Ukubonakala kweentambo ezinxulumene nazo kudibaniswa nezinto ezininzi, kwaye ngaphambi kokuba uphathwe, kuyimfuneko ukuchonga isizathu esibalulekileyo. Phakathi kwezona zinto ziqhelekileyo zilandelayo:
ukuhlanjululwa kakubi kwizonyiso (iindawo zokuhlala ezinomsoco okanye i-conditioner zibangela ukucasula kunye neeseli zecala)
ukuhlamba okungaqhelekanga kwentloko kunye nokusetyenziswa kwezimonyo ezingafanelekiyo (umzekelo, i-shampoo ekhethiweyo ingabonakali isikhumba esomileyo kunye nokubonakala kweentlaka)
Ukungabikho kwamavithamini (ngokukodwa, ukungabikho kwamavithamini A, E, B)
uxinzelelo kunye nokukhathala (kunokubangela ukuhluleka komsebenzi weenkqubo ze-endocrine kunye neentlanzi)
Ukumisa imihla ngemihla ngesomisi ezinwele (kubangela i-scalp eyomileyo)
AmaMasks for dandruff: zokupheka ezenziwa ngabantu
Abancedisi abangabalulekanga kunyango lwe-scalp eyomileyo yimaski eyenziwe ekhaya. Phakathi kweenzuzo zabo: ziqukethe izithako zemvelo kuphela, azikholisi kwaye zivavanywa amashumi eminyaka.
Nceda nceda! Unyango kunye neemaski zendlu kufuneka ziqhutywe kwiinkqubo ze-8-10, ngokuphindaphindiweyo kwe-1-2 ngeveki.
Iifutha ze-oyile zokulahleka kweenwele kunye neenwele
Kwiimaski zasekhaya ngokumelene ne-seborrhea, ii-oyile zendalo zifanelekile. Ngokomzekelo, ioli ye-burdock iyasebenza kakhulu ekumanyeni kwesikhumba kwaye ngexesha elifanayo lixazulula ingxaki yokulahleka kweenwele, ukukhuthaza ukukhula kweenwele zentlungu nokuqinisa iingcambu. Ioli ye-Castor inondla kakuhle i-scalp kwaye ikhusela ukubonakala kwe-scalp. Kulula kakhulu ukulungiselela i-mask-based based mask: kufuneka ihluthe kancane kwindawo yokuhlambela amanzi kwaye igxutywe kwi-scalp 30-40 imizuzu ngaphambi kokuhlamba.
I-Mask-scrub ngokumelene neentambo ezinamafutha kunye netyuwa elwandle
Ngamafutha omnyuba, ukutshiza ngetyuwa lolwandle kusebenza kakuhle. Ukulungiselela kwayo, kuyimfuneko ukucoca ngobuncinane bamanzi 2-3 tbsp. l. ityuwa (okanye umxube we-soda netyuwa) ngaphambi kokubunjwa kwe-gruel. Ukucubungula umxube ofunyenweyo kuyimfuneko yokunyusa i-massage ukunyuka kwesikhumba sekhanda ngaphambi kokuhlamba kweentloko. Ukutshatyalaliswa okunjalo kususa ngokupheleleyo iiseli ezifile kwaye kuncitshiswe ukunyuselwa kwe-salping kwesikhumba.
I-anyu mask for dandruff
Kuhle ukuba i-seborrhea kunye no-onion oqhelekileyo. Ukwenza imaski ye-anyanisi, ugayile i-anyanisi encinci kwaye udibanise ijusi ngokusebenzisa i-napkin napkin.
Ijusi eliyiphumo kufuneka lihluthwe elukhumbeni kwaye lifakwe kwilweleni ngeyure, uze uhluthise inwele kakuhle nge-shampoo. I-anyu mask ine-drawback ephawulekayo - iphunga elibukhali elinokuhlala iintsuku eziliqela. Ngenxa yoko, emva kwalolu hlobo, sincoma ukuba uhlambulule iinwele zakho ngamanzi ngejisi lemon okanye i-aple cider viniga. Ukongezelela ekupheliseni iphunga, bancedisa ukulwa ne-dandruff.
I-recipe i-kefir-i-egg mask ekhaya
Le recipe yenye yeendlela eziphambili zezilwanyana ezinxamnye ne "flakes" ezimhlophe.
i-burdock yeoli-1 tbsp. l.
i-yolk yeqanda - 1 pc.
i-vitamin E (ukhetho) - 1-2 iifomsile
I-Yolk ibhaqa ibhotela.
Yongeza i-kefir ne-vitamin E (ukuba ifunwa). Umxube obangelwayo kufuneka ube negalelo elaneleyo.
Faka isicelo kwizinwele ezomileyo ngezandla zakho, ungayikhohlwa ukuthobeka ngobunzima ubunzima kwi-scalp.
Gcina imaski phantsi kwetawula 1-1,5 iiyure, uze uhlambe kunye ne-shampoo. Ungasebenzisa le maski ukuya kathathu ngeveki.
Eyesisixhenxe enye yawa swoop: ubuhle-intsha yeenwele zikaSyoss Ukuvuselela 7
Imibala yeenwele: inkqubo ekhaya
Iimbali eziqhelekileyo eziqhelekileyo ngeenwele
Indlela yokusebenzisa idayi yobugcisa obunomsebenzi
Indlela yokuphelisa i-curb curlers
Iimpawu zeenwele zeenwele ezinde kunye neenwele
Iipateni ezilula zamathoyizi ezenziwe ngengubo ngezandla zakho
Ukuzivocavoca ukuqinisa imisipha yemilenze
I-pancakes ephuhliweyo kunye nevuvu ngokugcwalisa yonke into
Cellulite: ukulungiswa kwesibalo
Isobho se-Sorrel kunye noshizi
Ziziphi iinzuzo zokutya?
Ulwazi olubanzi malunga ne-pelargonium. Iingcebiso zokuvelisa nokunyamekela
Izinto eziphathekayo eziphathekayo kubafazi
Ikhekhe leshokoledi ngee cherries
Biography kaVolkova Catherine Gennadyevna
Ukuphila kwikhulu elinamanci mabini
Ukuzivocavoca ngexesha lokukhulelwa
Amabhunga okutya okunempilo kubantwana besikolo
I-Oat ibambelela kubhiya
Utywala nge semolina kwi-pizza mhluzi
Izipho zendalo ezishushu